Muuri News Network » DAAWO: MD Xasan sh, oo si lala yaabay kaga hadlay Bahdilkii RW CC ee JOMO KENYATTA..
DAAWO: MD Xasan sh, oo si lala yaabay kaga hadlay Bahdilkii RW CC ee JOMO KENYATTA..
Feb 26, 2016 - Comments off
Xasan Sheekh, Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay tallaabada Garoonka Jomo Kenyatta loogu xanibay wafdigii R/wasaare Cumar C/rashiid, maalintii Sabtida.
Madaxweynaha Somaliya, ayaa dafiray in Ra’iisal Wasaaraha muddo saacado ah lagu xanibay Garoonka Jomo Kenyatta Ee Magaalada Naiorbi, balse wuxuu tilmaamay in dadka la xanibay ay ka mid ahaayeen wafdigiisii.
“Ra’iisal Wasaaraha ma’ahayn aniga intaan ogahay waxa la haystay, laakiin dad kaloo laga yaabo Ra’iisal Wasaaraha inay la socdeen weeye, Xildhibaano ha ahaadaan.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliya.
Xasan sheekh ayaa yiri “Dal kasta qawaaniintiisa iyo nidaamkiisuu leeyahay, dal-na qawaaniintiisa iyo nidaamkiisa kuma fara-geliyo, wixii diblomaasiyaddu ay mudneydna waan marnay. Idaacadaha iyo Warbaahinta isagama sheegno anagu iyo dowladaha sida aan u macaamilno.”
“Dowladda Kenya wixii khalad oo dhacayna diblomaasiyad looga macaamilo leedahay, waan marnay, wixii khalad dhacayna waala saxayaa, laakiin waxaasi way dhacaan, anagaa qabanaa dhoofino, ayaguna way soo dhoofiyaan, laakiin hadana saaxiibaa nahay, col maahin.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wuxuu markale ku celiyay inaysan Somaliya iyo Kenya col ahayn, isla-markaana ay ka dhaxeyso masaaliix badan.
Marka laga soo taggo hadalka ka soo yeeray Madaxweyne Xasan, ayaa wuxuu Ra’iisal Wasaare Sharmaarke uu soo saaray qoraal uu Kenya kaga dalbanaayo inay sharaxaad ka bixiso, sababta ay u xanibtay qaar ka mid ah xubnihii safarka ku wehlinaayay waxaana uu ku hanjabay in tilaabo ku haboon Kenya ay qaadi doonto dowlada Soomaaliya.